नायिका बन्दा एक्साइटेड छिन् सुन्तली ! | Kendrabindu Nepal Online News
5649200 350333 2884959 2413908
नायिका बन्दा एक्साइटेड छिन् सुन्तली !
२७ श्रावण २०७६, सोमबार १७:२०
हास्यकलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले अब चलचित्र बनाउने भएका छन् । हास्यकलाकारको परिचय बनाएका धुर्मुस सुन्तलीले ‘सेन्टी भाइरस’ नामक चलचित्र बनाउने घोषणा गरेका हुन् । सुबिहानी फिल्मसकाे ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्रलाई निर्देशक रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्नेछन् ।
चलचित्रमा धुर्मुस सुन्तलीसँगै दयाहाङ राई, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, कमलमणि नेपाल, राजाराम पौडेल, सूर्यमाला खनाल, वसन्त भट्ट र दीपक आचार्यको मुख्य भूमिका रहनेछ ।
पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा व्यस्त धुर्मुस–सुन्तली लामो समयपछि आफ्नो पुरानो पेसामै फर्केका हुन् । ‘सेन्टी भाइरस’को मुख्य भूमिकामा देखिने सुन्तलीले चलचित्रमार्फत आफ्नो वर्षौंदेखिको सपना पूरा हुने बताएकी छन् । सुन्तलीको समग्र कलाकारिता, सामाजिक कार्य, चलचित्रमा प्रवेश गर्न लाग्दाको अनुभूति लगायतका विषयमा केन्द्रित रही केन्द्रविन्दुकर्मी सिम्रन तामाङ स्याङ्बोले मीठो कुराकानी गरेकी छन् ।
लामो समयपछि फेरि कलाकारिता क्षेत्रमा फर्कनुभएको छ । कत्तिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ ?
म एकदम धेरै एक्साइटेड छु । यतिका वर्षसम्म कलाकारिता क्षेत्रबाट टाढा रहँदा मेरा दर्शक तथा शुभचिन्तकहरूले चलचित्र र टेलिचलचित्रमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर धेरै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो । सेन्टी भाइरसको घोषणामार्फत दर्शकहरूलाई खुसी पार्न सकेकामा म निकै खुसी छु ।
टेलिसिरियलबाट चर्चामा आउनुभएको सुन्तली एकाएक कसरी चलचित्रमा आकर्षित हुनुभयो ?
चलचित्रमा काम गर्ने त मेरो सानैदेखिको सपना थियो । विशेषगरी म चलचित्रमा हिरोइनको रोल गर्न चाहन्थेँ । त्यसैले कक्षा ९ मा पढ्दा नै ‘चित्कार’ नामक चलचित्रको लागि अडिसन दिन गएकी थिएँ र छनोट पनि भएकी थिएँ । तर पछि मैले त्यसलाई छाड्नुपरेको थियो ।
पछि रेडियो नेपालमा रेडियो नाटक सुरु गरेपश्चात सीतारामजी, दिपक दाइ, दीपा दिदीलगायत थुप्रै कलाकारसँग भेट हुँदै गयो ।
त्यहीँबाट टेलिसिरियलतर्फ आकर्षित भएँ । त्यसताका टेलिसिरियलहरूमा कमेडीको लहर थियो र दर्शकहरूले पनि मलाई कमेडियनको रूपमा धेरै रुचाइदिनुभयो । त्यहीँबाट म हास्यकलाकारको रूपमा परिचित भएँ । हास्यकलाकारका रूपमा चर्चित भए पनि हिरोइन बनेर ठूलो पर्दामा काम गर्ने रहर भने कहिल्यै मेटिएन । त्यसैले अहिले त्यो सपना पूरा गर्न चलचित्र क्षेत्रलाई रोजेकी हुँ ।
चलचित्रको नाम सेन्टी भाइरस कसरी जुर्‍यो र तपाईं यसमा कसरी जोडिनुभयो ?
चलचित्रको नाम सुरुमा एन्टी भाइरस राखेका थियौँ । तर पछि कथावस्तु मोडिँदै जाँदा एन्टी भाइरसभन्दा सेन्टी भाइरस सुहाएजस्तो लागेकाले यही नाम राखियो ।
निर्माताले ३–४ वर्षअगाडिदेखि नै मिलेर चलचित्र बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, ०७२ सालको भूकम्पपछि हामी (सीतारामजी र म) सामाजिक कार्यमा संलग्न भयौँ । चलचित्र त के गरिआएको टेलिसिरियललाई समेत निरन्तरता दिन सकेनौँ । अबचाहिँ सिरियलबाट फड्को पनि मार्नुपर्‍यो भनेर यसमा जोडिएका हौँ ।
तपाईंहरू चलचित्रमा व्यस्त भएपछि सामाजिक कार्यचाहिँ कसरी अघि बढ्छन् त ?
सामाजिक कार्य हाम्रो फाउन्डेसनले अघि बढाउँछ । पहिला पो फाउन्डेसनसम्बन्धी कुनै ज्ञान थिएन, आफूले नगरेसम्म कसैले गर्दैनन् भन्ने सोच थियो, त्यसैले आफैँ खट्यौँ । अहिले त सञ्चालक समिति, लेखा समिति, प्राविधिक समिति, निर्माण समिति आदिले युक्त व्यवस्थित फाउन्डेसन छ । हामीले योजना बनाउने र बेलाबेलामा मिटिंग एरेन्ज गर्ने र निगरानी राख्ने काम गरे पुग्छ । सबै काम समितिकै माध्यमबाट हुन्छ ।
चलचित्रको छायांकन कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? कति दिनमा सक्ने योजना छ ?
सुटिङ यही भदौ ३ गतेबाट सुरु गर्ने र ३५ दिनमा सक्ने योजना हो । तर वर्षाको समय छ, त्यसैले ठ्याक्कै भनेकै समयमा त शायद सम्भव नहोला । तर हामी खर्च नबढाउन पनि सकेसम्म समयमै पूरा गर्न प्रयास गर्नेछौँ ।
सिरियलमा काम गर्ने कलाकारहरू चलचित्रतर्फ आकर्षित हुने ट्रेन्ड बढ्दो छ । तपाईले पनि ट्रेन्ड पछ्याउनुभएको हो ?
ट्रेन्डकै पछि लागेको त होइन । मैले अघि पनि भनेँ कि मलाई सानैदेखि ठूलो पर्दामा काम गर्न मन थियो । अनि लामो समयसम्म सानो पर्दामा काम गरेको अनुभव सँगालेर म यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ ।
ठूलो पर्दा र सानो पर्दामा अभिनय गर्दा के फरक हुन्छजस्तो लाग्छ ?
सानोतिनो रोल गरे पनि मैले अहिलेसम्म ठूलो पर्दामा नायिकाका रूपमा काम गरेकी छैन । त्यसैले यही फरक छ भन्न त चलचित्र पूरा भएपछि मात्र सकिन्छ ।
हरेक चलचित्रले केही न केही सन्देश दिएको हुन्छ । यो चलचित्रले कस्तो सन्देश दिन्छ ?
धेरै सन्देश दिन्छ । यो विशुद्ध सामाजिक चलचित्र हो । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त विकृति–विसंगति एवं नकारात्मक सोचका साथै सकारात्मक सोचलाई पनि विषयवस्तुका रूपमा उठान गरेको छ । यिनै कुरालाई रमाइलो ढंगबाट प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
dhurmush, sentivirus, shuntali, कुञ्जना घिमिरे, धुर्मुस, धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशन, धुर्मुस–सुन्तली, सीताराम कट्टेल, सेन्टी भाइरस
Prevसरकारबाट युवा प्रतिभा सम्मान पाएका १० युवा
आइएसटी कलेजमा थपियो नयाँ आकर्षण (भिडियोसहित)Next
‘सेन्टी भाइरस’ को नकारात्मक समीक्षा गर्नेलाई सुन्तलीको जवाफ (भिडियोसहित)
धुर्मुस-सुन्तलीको करियर र समाजसेवा सँगसँगै (भिडियो अन्तर्वार्ता)